> Resource > Android > Qaado Screenshot ah ee Android Qalabka la One Click
Waxaan u baahanahay sawirada qaar ka mid ah macluumaadka, iyo sida kaliya baan u fahmi karaa sida loo helo waa in ay qaataan sawir ah, taas oo u muuqdo crummy oo uu leeyahay shakhi dhibsado in kabaha. Ma jiraan hab lagu kaliya qaadan shaashadda fudud on qalabka android?
Dhab ahaantii, waa wax sidaas u adag tahay in laga soo qaado PC shaashada ku Android, marka aad gaadho in tababare Android caawimaad. Waa Wondershare MobileGo for Android (Windows), ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Tani Tababaraha Android xunna loogu talagalay ku siinaysaa fursad ah in la qaato shaashadda wax ku saabsan telefoonka Android ama kiniin la mid click aad. Markaas, waxaad badbaadin kartaa shaashadaha kombiyuutarka ama muujiyaan iyaga ka mid ah oo aad saaxiibadaa iyo xubnaha qoyska.
Download barnaamijkan in shaashada ka Android qaado.
Fiiro gaar ah : In qayb hoose, ogolaanaysaa 'isku day Wondershare MobileGo for Android wada. Haddii aad qabto Mac ah, oo aad qaadi karto shaashada ee talaabooyin la mid ah la version Mac - Wondersahre MobileGo for Android Pro (Mac).
Qaado shaashadda qalabka Android si fudud
Marka aad abuurtaan Tababaraha this Android kombiyuutarka, daaqadan u iman doonaan inay adiga hortaadaba ku sameeyeen.
Fiiro Gaar ah: Tani Tababaraha Android magacaabay Wondershare MobileGo for Android si buuxda u yahay kumanaan socon ee Android phone ama kiniiniga ordaya 2.0 Android iyo ka dib. Fadlan hubi dheeraad ah oo faahfaahsan oo ku saabsan qalabka Android taageeray .
Tallaabada 1. Isku qalabka Android inay kombiyuutarka
Dadka isticmaala Windows, waxaad isticmaali kartaa cable USB Android ama Wi-Fi in ay ku xidhmaan telefoonka Android ama kiniin in kombiyuutarka. Sida dadka isticmaala Mac, waxaad samayn kartaa xidhiidh ah iyadoo la isticmaalayo cable USB ah. Ka dib markii la ogaado, qalabka Android la soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Qaado Screenshot on Android
Sida aad ka arki, "Screenshot" button lagu muujiyay hoos telefoonka Android uu furmo suuqa hoose. Ka hor inta qaadashada shaashadda ku Android, waa inaad marka hore hubi in shaashadda qalabka Android waa mid ka mid ah in aad rabto in aad qaadato shaashada.
Ka dib markii in, guji "Screenshot". Marka uu furmo suuqa file browser soo booda, raadsada goob ka si loo badbaadiyo shaashada ka. By default, shaashada, kaasaa badbaadi doona qaab PNG.
Haddii aad rabto in aad qaadato Screenshot kala duwan, waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay soo bandhigaan aad screen doonayo qalabka Android. Markaas, riix badhanka soo socda si ay "Screenshot" si cusub shaashadda uu furmo suuqa hoose. Ka dib markii in, waxaad riixi kartaa "Screenshot" si ay isugu dayaan qaadashada Screenshot on Android.
Bal eeg, taasi oo dhan oo ku saabsan sida loo qaato shaashadda telefoonka Android oo kiniin ah. Just mid click oo aad ka heli Screenshot aad u jeclaystay. Hadda, u tag oo u muujiyaan off Screenshot ka qoysaska iyo saaxiibada aad.
Download MobileGo for Android in ay isku dayaan sidii ay u qaadan shaashada ku Android.